လင်းသန့်| January 16, 2013 | Hits:8,054
| | ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ့် နန်းခင်ဇေယျာ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
Dove January 17, 2013 - 12:26 am Every beautiful girl is not good actress. I wish she can do it well in action movie business.
Reply hotladylay January 17, 2013 - 6:55 am ဦးကျော်သူကြီး ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်ကိုနစ်မြုတ်နေတဲ့ ရတနာရွှေလှေကြီးတစင်းပြန်လယ်ရှာဖွေရရှိသလိုခံစားရပါတယ်။
Reply Ko Khine January 26, 2013 - 10:42 pm တိုင်းရင်းသူလေး နန်းခင်ဇေယျာ ဒီထက်မကအောင်မြင်ကျောင်းကြားပြီး နာမည်ကြီး မင်းသမီးများကျော်တက်နိုင်ပါစေ ။ ယဉ်ကျးသည့်စာရိတတ များဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပါစေ ။
Reply နေမင်းသူ March 3, 2013 - 4:32 pm မမနန်းခင်ဇေယျာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲဖြတ်သန်းသွားပါနော်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်